Daalibaan oo weerareysa Gobolo diidan. - Wardeeq 24 TV Daalibaan oo weerareysa Gobolo diidan. Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dunida Daalibaan oo weerareysa Gobolo diidan.
Daalibaan oo weerareysa Gobolo diidan.
Motaqi wuxuu sheegay in Taalibaan ay dadaal badan samaysay si ay wadaxaajood ula gasho hoggaamiyeyaasha xoogagga mucaaradka ee Panjshir, laakiin wuxuu sheegay inaan wax natiijo ah laga gaarin, taas oo uu ku tilmaamay “nasiib darro”.
Previous articleWafti heer sare ah oo ka socda Itoobiya oo soo gaadhey somaliland.
Next articleMagaalada Toronto oo lagu diley Wiil soomali ah.